ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာ တက္ကသိုလ် ဘားအံ နှင့် ဇွဲကပင်မြေ Technological University Hpa-an: FireFox ကို မြန်အောင် Tweak Network Add-On Firefox Double speed
FireFox ကို မြန်အောင် Tweak Network Add-On Firefox Double speed
ကျွန်တော် Firefox add-0n အကြောင်းတွေ တင်ပြချင်တာနဲ့ ရှာလိုက်တာ Firefox မြန်အောင်လုပ်နည်းလေးကို တွေ့လို့ တင်လိုက်ပါ။ အခြား တင်တဲ့သူတွေ နဲ့ တူခဲ့ရင်လည် ကျွန်တော် တောင်ပန်းပါတယ်. ကျွန်တော် Google ကတွေ့လို့တင်ပေးလိုက်တာပါ။
1. https://addons.mozilla.org/en-US/firefox/addon/327 ဒါကို click လိုက်ပါ။ Firefox မှာ Install လုပ်လိုက်ပါ။
2. ပြီရင် Firefox မှ Tools ကို click လိုက်ပါ။ Tweak Network Settings ကို click လိုက်ပါ။
3. အောက်ပါအတိုင်း ကျလာပါမည်။ Pipelining အကွက်ထဲကို အမှန်ခြစ် ပေးလိုက်ပါ။ Power Button ကို click လိုက်ပါ။ ပြီရင် Apply ကို click လိုက်ပါ။
4. ပြီရင် Ok ပေါ့။
ရေးသားသူပြုစုသူ ကျော်ထက်ဝင်း နည်းပညာတက္ကသိုလ်-ဘားအံမြေ အချိန် 2:04 AM